Tiriniti yakapinda sei mukereke muna 325 AD pakanzuru yeNicaea
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Tiriniti yakapinda sei mukereke muna 325 AD pakanzuru yeNicaea
Tiriniti yakapinda sei mukereke muna 325 AD pakanzuru yeNicaea
Mapostora haana kubvira amboshandisa izwi rekuti “Tiriniti”. Kereke payakabvumirana kuwedzera mazwi asimo muMagwaro matsvene muBhaibheri, ipapo ndipo pakapindira Tiriniti.
Muna AD70 Jerusarema rakaparadzwa nevaRoma. Panguva iyi Mupostora Pauro aive afa. Sevamwe vazhinji veMapostora. Saka kwaive kusisina hwaro hwechiKristu- kwaive kwasara mifungo nemazano ehama munashe chete.
Zvinoshamisa, venhorondo havazivi chinhu pamusoro pekereke pakati paAD 70 na AD 120. Pagore 120 AD rumwe rudzi rwekereke rwaive rwatanga, iyi yaive yakasiyana nekubata kwaiitia kereke yeTestamente Itsva, yaive nemunhu aiitungamirira achizvidaidza kuti bhishopu weguta. Hutungamiri hwevanhu hwaive hwatanga kutsiva dzidziso yavapostora. Vakuru nevatariri vakatanga kusairirwa parutivi nevatungamiri vemakereke vaive nenzara yehukuru vachizivisa nekudzidzisa mifungo yavo kuvanhu vaiungana kuti vanamate.
Magamba akaitwa, saPetro ainzi akasvika kuRoma, asi hakuna humbowo hwekuti akasvikako. Pauro akamhoresa vanhu 27 munwadhi yake kuvaRoma, asi haana kubvira ataura zita raPetro. Saka kukanganisa kwakapindira mukereke, nekuti kwakadzokororwa kasingaperi, vanhu vakabva vatotanga kukutora sedzidziso yechokwadi.
Vatungamiri vemakereke vaive nenzara yekutonga vakadzidzawo maitiro ezvematongerwo enyika nenzira dzaishandiswa kutungamirira hushe hweRoma, vakabva vasarudza kuti chaive chinangwa chekereke kuti itonge hushe hweRoma. Vaikwanisa chete kugona kuita izvi nekuisa chimiro chebato chakasimba, chakatorwa kubva pamatongerwo aiitwa hushe hweRoma, uye hunhu hwakasimba apo munhu mumwechete aive pamusoro pekereke aifanira kuteererwa.
Negore 170 AD nzvimbo yega yega yaive yakutongwa nekusimudzirwa kwehutungamiri hwekereke, sezvo vanhu vaive vatanga kusimudzirwa kubva pachinzvimbo kuiswa pane chimwe chiri pamusoro. Mutungamiri wepamusoro aive bhishopu, bhishopu aimiririra nzvimbo yaanenge achitungamira. Mabhishopu akazova vatungamiri vekereke munguva shoma yakazouya apo bato rakatanga kupikisa hushe hwenyika.
Kereke yakabva yatanga kuzviona sebato repasi rese, sezvaive hushe hwenyika yeRoma.
Kereke yakatendera vanhu vayo zvematongerwo enyika, pachinzvimbo cheMagwaro, kuti zvitungamire nzira yaikura nayo kereke. Yakabva yatanga kuva bato rinoona nezvemagariro evanhu munharaunda maitiro ayo akatanga kungofanana neehurumende yeRoma, saka nzvimbo idzodzo, maguta uye matunhu ese akabva asimudzira vanhu vaitungamirira kereke kuti kukosha kwavo kuwedzere. Panguva yaizouya kereke yaizosimudzira munhu kuti atungamirire purovhinzi rese. Vakarasikirwa nerudo rwekuparidzira munyika, vakatanga kukoshesa kuva bato rakakosha raiita mabasa ezvemagariro evanhu, uye kuita hukama hwakakosha munezvematongerwo enyika. Vakabva vabvawo pakutevera Magwaro zvakazara pazvese zvavaitenda mazviri.
Nzvimbo dzese dzaigara vanhu dzaive chikamu chekereke imwechete kana kuti Kereke yeRoman Catholic (sezvazvakarehwa naIgnatius).
MaJuda emuTestamente Yekare havana kutenda kuti Mwari Wemasimbaose anokwanisa kuva Munhu. Saka maJuda haana kutenda kuti Mwari Wemasimbaose akauya panyika akagara muMunhu, akazviratidza mumunhu Jesu.
Pauro akadzidzisa kuti kuzara kwehuMwari kunogara maari pamuviri.
JOHANE 1:18 Hakunomunhu wakatongoona Mwari;
Munhu wenyama haagoni kuona Mweya. Haugoni kutaura kuti waona Mwari. Munokwanisa kuona muviri unogara Mwari. Jesu Kristu ndiye Muviri wenyama unogara Mwari.
VAKOROSE 2:9 Nokuti kuzara kwovuMwari kunogara maari [Kristu] pamuviri.
Mweya usingaonekwe waMwari Baba wakavoneka (Akazviratidza) nemabasa akaitwa neMwanakomana wake, Munhu Jesu. Kutarisa Jesu ndiko kwega kungatiswededze pakuona kuti Mwari anogona kuita zvipi.
Saka Jesu aive zvese Munhu naMwari. Muviri wake wenyama wanga usiri Mwari. Mwari haasi nyama neRopa.
Asi Mwari Baba vaive Mweya unoshamisa usingavonekwe waigara muMuviri wemunhu. Muviri wake wenyama ndiwo wakamuita “Mwanakomana waMwari”. Nekuti Mwari Mweya kwete nyama.
Jesu aikwanisa kuzviti akafanana naMwari nekuti Iye, Munhu wenyama, naBaba vanoshamisa vaive munhu mumwechete.
VAFIRIPI 2:6 Akatimutsa pamwechete naye, akatigarisa kudenga pamwechete naye, muna Kristu Jesu.
Asi Mweya usingavonekwe waive Maari waimuudza kuti oitei saka waive mukuru kukunda Muviri wake wenyama.
JOHANE 14:29 ... nokuti baba vakuru kwandiri.
Saka Bhaibheri harina kuti Jesu aive akaenzana naMwari.
Saka Jesu aive Muviri wenyama watinoona wakasarudzwa naMwari kuti agare mauri kuti Mwari “aonekwe” mumabasa anoitwa naJesu.
Zvino dambudziko rinopikisa rinobva ratanga. Pasina zera rimwe kana maviri mumashure mekufa kwemapostora, maKristu ekuvaHedeni vakatanga kunetseka kutambira kuti munhu Jesu anokwanisa kuva Mwari Wemasimbaose.
Zvaive nyore kuti pfungwa dzemunhu dzimuone “seMwanakomana waMwari chete”. Zvishoma nezvishoma pfungwa iyi yakatanga kuwana nzvimbo yekuti, kana Jesu aive Mwanakomana waMwari, kunofanira kuva nemumwe munhu Kudenga, aive “Mwari Baba”.
Pakutanga pfungwa yekuti paive neVanhu vaviri iyi yaive isina musoro, asi yakazarura musuwo kufungidziro dzevanhu zhinji pamusoro pehuMwari. Zvishoma nezvishoma maKristu aya akabva pane zvaive zvakanyorwa muBhaibheri.
Pakutanga kwakanga kusina Tiriniti, nekuti hakuna Magwaro anotaura kuti kune vanhu vatatu vakagara pachigaro chehushe Kudenga. Saka dzidziso yevanhu vaviri yaBaba neMwanakomana sevanhu vakasiyana yakatanga kusimba. Nguva yakazouya munhu wechitatu akawedzerwa. Dambudziko guru raive rekuita mufananidzo wevanhu vaviri kana vatatu vose mumwe nemumwe wavo ari Mwari, asi ivo vachiti kuna Mwari umwechete.
MaKristu akabva atanga kushandisa pfungwa dzakabva muzivo yemaGiriki, vakazivisa izwi rekuti “triad” “mitumbi mitatu” rakatangwa neumwe muzivi wechiGiriki ainzi Plato. Plato aiti zai raive mumitumbi mitatu une yoko, chikamu chichena uye mateko aro. Zai rimwechete muzvikamu zvitatu zvakasiyana. Asi zvisinei zvikamu zvitatu zvinoti yoko, chikamu chichena uye mateko hazvina kufanana kana nepaduku zvapo. Kana kuti tingati yoko ndiro zai rese. Zvisinei kudaidza Mwari kuti “zai” chaive chisiri chinhu chakanaka. Nyika yaive ivhu, gungwa nenzvimbo yatinoti denga ndizvo zvinotaura Plato. Mvura yaive chando chakaoma, mvura uye mweya wemvura yakapwira. (vaive vasati vaziva pamusoro pemapurazima.) Vatatu mumwe kana mumwe muvatatu yaive zivo yemapegani echiGiriki, uye kufunga kwakaneta kudai kwaizokura zvishoma nezvishoma kuita izwi risimo muBhaibheri rekuti “Tiriniti”.
Mapegani aive aedza kwenguva refu kusimbisa pfungwa yeTiriniti.
Munyori wematombo wekuEgipita akaratidza vanhu vatatu vakagara pachigaro chimwechete, zvinomiririra mwari wavo wetiriniti.
IHS kunyorwa kuchiri kuonekwa nanhasi pamaaritari kana zvipfeko zvemamwe masangano emakereke. Izvi zvakatorwa pambatya dzemaprista echipegani ekuEgipita enguva dzekare.
Mufananidzo weTiriniti wevanyori vemazuva ano unoratidza pfungwa imwechete iyi.
MaHindu aive nemufananidzo wairatidza zviso zvitatu pamusoro mumwechete.
Saka kuonekwa kwaiitwa mwari kumapegani kwaive “mumwechete asi vatatu” mutiriniti dzechipegani dzakasiyana. Tichitarisa kubva pazvinyorwa zvemifananidzo izvi, yaive pfungwa yaikanganisa mafungiro. Saka mapegani akapedzisira akutenda munanamwari vatatu. Vakazoenderera mberi vakatangawo kutenda munanamwari vazhinji.
MaKristu anotenda kuTiriniti vaida kutenda muVanhu vatatu, asi muna Mwari umwechete.
Mufananidzo uri pasi unoratidza chitendero chemaKristu chekuti Vanhu vatatu muhuMwari vakaita sei.
Kuva neVanhu vatatu, mumwe nemumwe wavo ari Mwari, asi vachitendawo kuti kuna Mwari mumwechete kwaive, uye kuchiri, dambudziko guru. MaKristu, avo vakaona kuti vaGiriki vaive vanhu vaifunga zvakangwara, parizvino vanotevera kufunga kwemapegani echiGiriki. Mwari mumwechete muhutatu. Mumwe chii? Constantine mambo weRoma akamanikidza mabhishopu paKanzuru yeNecaea muna AD 325 kuti vatambire izwi rekuti “kukosha” muchirungu rinonzi “essence”. Mwari aive mumwe akakosha (zvisinei nekuti izvi zvinorevei). Iyi izivo yemaGiriki. MaGiriki vaive vakachenjera pakutsanangura chinhu chakavanzika nekushandisa mazwi asina kujeka. Nhasi uno zvinodaidzwa muchirungu kuti “verbiage” kunova kutaura kwakachenjera kwakareba kunoshanda sedzimaidzo yemashoko inoviga chinhu chekuti hapana tsananguro chaiyo pachinhu chinonzi Tiriniti. Saka pakanzuru yeNecaea muna 325 AD,ndiyo yakava nguva yekutanga yekuwedzerwa kweshoko risimo muBhaibheri “rekukosha” kweTiriniti. Zvakakonzeresa kusanzwisisa kukuru, asi mambo Constantine akati aizoranga mabhishopu vairamba uye vaisatenderana nazvo. Akapawo mari zhinji kune avo vakabvuma kutambira mazwi asiri muBhaibheri akaita serekuti “essence” nerekuti “Tiriniti”. Izvi zvakavhura gaba rizere manyongorosi, mazwi mazhinji asiri muMagwaro aizotambirwa pakuedza kwavo kutsanangura Tiriniti.
“Vanhu vatatu vari muhuMwari” -- zvisinei nekuti hazvisi muMagwaro zvachose, uku kwakava kutenda kukuru. Zvaive zvakaipisisawo sezvo Mwari aive asisakwanisi kutsanangurwa neZita rimwechete. Vanhu vatatu vaisakwanisa kuva nezita rimwechete. Saka vakangobvisa zita raMwari vakaritsiva nemazita ezvinzvimbo zvitatu. Nenguva vanhu vakatanga kutaura kuti zvinzvimbo zvitatu zvaMwari ndiro raive Zita rake. (Kunyangwe kutaurwa kwazvo hakusiriko.) Zvinhu zvose zvakatanga kuitwa muZita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Vanhu vakatadza kuona kuti zita raMwari raive ratsakatika mukuita izvi.
AMOSI 6:10 ... Ipapo uchati: Nyarara, nokuti hazvina kufanira kuti tireve zita raJEHOVA.
Saka nhasi, maKristu haazivi Zita raMwari.
Kutsanangura Mwari saMwari umwechete, asi vari Vanhu vatatu vakasiyana, mufananidzo wakadzima kwazvo. Saka Tiriniti icharamba iri chinhu chakakanganisika uye pfungwa isina kujeka pakati “peVanhu vatatu mumwe nemumwe wavo ari Mwari”, asi kuri naMwari umwechete. Saka “vatatu mumwe” kwaive kutaura kwakatorwa kuruzivo rwechiGiriki kuti vanhu vaedze kudzimaidza pfungwa isingakwanisi kunyatsonzwisiswa nevanhu.
MuTiriniti, Mweya Mutsvene hausi Mwari Baba sezvo vari Vanhu vakasiyana. Asi Maria akazadzwa neMweya Mutsvene, Mweya Mutsvene akaisa muchibereko chake Mbeu yakaita Mwana Jesu. Asi kuita uku kunoita kuti Mweya Mutsvene ave Baba vaJesu. SeMwana wemunhu, Jesu haangave nanababa vaviri vakasiyana. Saka Mweya Mutsvene ndiwo Mwari Baba. Saka Tiriniti, kubva pakutanga, yairwisa Magwaro uye inofanirwa kutsanangurwa nemazwi asiri muBhaibheri. Zvakadaro, maKristu vakasiya Magwaro aipikisa Tiriniti vachiti akaipa.
MATEO 1:20 ... Nokuti chakagamuchidzwa mukati make ndechoMweya Mutsvene.
Baba vemwana chete ndivo vanokwanisa kugamuchidza mwana muchibereko chamai vake.
Kwakaitika kukakavadzana kunotyisa pakanzuru yeNecaea, asi mambo Constantine akabva ati aizouraya vose vaipikisa, akazvipira kuvaka zvivakwa zvakanakisa zvemakereke uye kupa mari kune mabhishopu vaitambira mazwi aya uye mazano ake aive asiri muBhaibheri.
Kukura kwekushaiwa hanya pamusoro pemazwi asiri muBhaibheri aiwedzerwa kuMagwaro kwakatungamirira pakurambwa zvinosuwisa kwezvinhu zvakataurwa muBhaibheri.
“Mwari Baba” zviri muMagwaro, asi kwete “Mwari Mwanakomana”. Kana kuti “Mwari Mweya Mutsvene” hamungazviwane muBhaibheri.
“Mwari Mwanakomana” hazvisi muBhaibheri, asi “Mwanakomana waMwari” zvirimo. Vanotenda kuTiriniti havakwanisi kutsanangura musiyano uyu.
“Vanhu vatatu muhuMwari” hazvimo muMagwaro.
Baba neMwanakomana “vakaenzana” hazviwanikwi muBhaibheri.
This became a fundamental problem with the Godhead. Izvi zvakabva zvava dambudziko guru pamusoro pehuMwari.
Jesu akati Baba vake vaive vakuru kupinda zvaaive iye.
JOHANE 14:28 ... : Nokuti Baba vakuru kwandiri.
VAFIRIPI 2:5 Ivai nomoyo uyo, wakanga uri munaKristu Jesu vo.
6 Iye kunyange akanga akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari ndichinhu chinofanira kubatisiswa.
Asi Jesu anoti akaenzana naMwari.
Angaenzane sei naMwari kana Mwari ari mukuru kwaari?
Dambudziko reTiriniti iri harigoni kugadziriswa kana vachiri vanhu vaviri vakasiyana. Izwi rekuti “kubatirana zvakaenzana” harisi muMagwaro, saka harina charinotsanangura. Zvakadaro, rinorwisa Jesu paanoti Baba vakuru kupinda iye.
“Munhu wekutanga muhuMwari” , “Munhu wechipiri muhuMwari” , uye “Munhu wechitatu muhuMwari”-- uku kumwe kutaura kuzhinji kusiri muMagwaro.
Nekushandisa mashoko mazhinji asiri muMagwaro kutsanangura Mwari, zvinova pachena kuti kereke yakabva pakutenda kwekutanga kwevapostora.
Kereke yekutanga yaitenda zvaive zvakanyorwa nevapostora. Havana kubvira vakakavara kana kuona chakaipa pane zvakanyorwa nemapostora.
JOHANE 17:20 Handinyengetereri ava bedzi, asi naivo vanotenda vo kwandiri neshoko ravo.
Tinoziva pamusoro paJesu kupfurikidza Shoko rakabva kuvadzidzi, kana kuti vapostora sekudaidzwa kwavakazoitwa.
Zvakazorasikira papi? Pane njodzi huru pakusimbirira pachinhu chimwechete, morasa zvimwe zvachose.
Dambudziko rakatanga apo maKristu akatanga kufunga pamusoro paJesu seMunhu akasiyana naMwari Baba.
Vakasimbirira pakuti Baba neMwanakomana vanhu vaviri vakasiyana, vachibva varamba Magwaro anorwisa pfungwa iyi.
Gakava rekutanga chairo paNicaea raive pamusoro paBaba neMwanakomana. Mweya Mutsvene wakazowedzerwa zvawo asi paive patove paya, “tinotenda muMweya Mutsvene”. Mamwe makore 56 akapfuura paine magakava dzidziso yeTiriniti isati yapasiswa zviri pamutemo pakanzuru yeConstantinople muna 381 AD. Asi zvese zvakatangira paNicaea muna 325 AD.
Nimrodi akavaka Baberi, akaita hushe hwekutanga hwepasi rino muBabironi, iri kudaidzwa nhasi kuti Baghdad. Akaita zvinhu zvikuru zvizhinji zvekuti vakazomudaidza kuti “El Bar” zvichireva kuti “mwari mwanakomana”. Uyu ive munhu akazoita mwari totenda kubata kwake kwepamusoro.
Hercules akazosimudzirwa kuva mwari nekuda kwekushanda kwake kunoshamisa. Aivewo mwari mwanakomana, munhu akazova mwari.
Alexander the Great akaita mabasa echiuto makuru kwazvo zvekuti vanhu vekumabvazuva vakamutambira samwari zvine mufaro. Chero maGiriki vakatambira zviri nyore humwari hwake.
Alexander ndiye muGiriki wekutanga akararama muhukuru hwakaneta kudai ari mwari mwanakomana mupfungwa dzevanhu, nekuda kwebasa rake raive rakanakisa, richiri kutapa pfungwa vanhu nanhasi. Saka Athanasius, mutauriri mukuru pamusoro peTiriniti, akaona Jesu semunhu aishamisa kwazvo zvekuti akava “Mwari Mwanakomana”.
Izvi zvakasika kukanganisika kukuru sezvo zvaireva vanaMwari vaviri.
Kuita Vanhu vaviri mumwe nemumwe wavo ari Mwari (Mwari Baba naMwari Mwanakomana) asi tichifanira kuva naMwari mumwechete, kwaizoda basa guru rekufunga, asi kwaisazobvisa kukanganisika mumafungiro kuripo. Zvisinei, kufunga kuzhinji uku kwaiitika vanhu vachishandisa mazwi eruzivo rwemaGiriki. Mavhesi eBhaibheri haakwanisi kutsigira pfungwa yeTiriniti.
Kukanganisika mumafungiro kwakatangwa naConstantine achivamanikodza kutambira izwi risimo muMagwaro muchirungu rinonzi “essence” zvichireva kuti chinhu chakakosha pazvizhinji. Baba neMwanakomana vaive Vanhu vaviri vaive nekukosha kwakafanana. Kukosha kwakafanana uku kwaivaita Mwari.
Asi Mwari Mweya unorarama nekusingaperi, Jesu aive nemuviri wemunhu wakazvarwa. Mweya nenyama hazvina kukosha kwakafananana-- zvakasiyana. Saka chero pfungwa yekukosha yaitorasisa mafungiro evanhu.
Muviri waJesu waive nemavambo nekudaro waive usingazorarame nekusingaperi. Athanasius nevateveri vake vaiedza kuti Jesu aive “Mwanakomana anorarama nekusingaperi” asi izvi zvaive zvisingangoshaikwi muMagwaro chete asi zvaive zvisina simba kana zvichiiswa paMunhu wenyama akazvarwa nerimwe zuva.
Zvino kwakabva kwauya kutaura kwekuti Baba neMwanakomana vaive “vakaenzana” izwi raishandiswa nenzira yarisina kushandiswa naro muMagwaro iri rakakonzeresa kukanganisika kukuru.
JOHANE 5:36 Ini ndine chapupu chikuru kunaJohane; nokuti mabasa andakapiwa naBaba kuti ndiapedze, iwo mabasa andinoita, ndiwo anondipupurira kuti Baba vakandituma.
JOHANE 5:19 Zvino Jesu akapindura, akati kwavari: zvirokwazvo zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Mwanakomana haagoni kuita chinhu oga, kana asingavoni Baba vachichiita; nokuti zvose zvavanoita ivo, Mwanakomana unozviita saizvozvo vo.
Pano Jesu akaburitsa pachena kuti Baba vaive mukuru kwaari.
Rimwe dambudziko raive rekuedza kuisa Jesu muhuMwari seMunhu wechipiri. Nekuti, kuipisa zvinhu pagakava ravo “rakangwara”, pachinzvimbo chekuisa Jesu muhuMwari Bhaibheri rakaisa huMwari muna Jesu.
VAKOROSE 2:8 Chenjerai, kuti murege kutapwa nomunhu novuchenjeri, nokunyengera kusina maturo, achitevera tsika dzavanhu nezvokuvamba zvenyika, asingateveri Kristu.
Yambiro pamusoro pevuchenjeri hwemaGiriki nemazwi ahwo akaita sekukosha, vatatu mumwe nemamwe akadaro.
Kwaive nematiriniti mazhinji pakati pemapegani.
MaKristu aive asina chokwadi chekuti vanhu vatatu vaigara pachigaro chimwechete here (setiriniti yekuEgipita) kana kuti vaigara pazvigaro zvitatu zvakasiyana.
Kwanga kusina Magwaro anotaura kuti Mweya Mutsvene unogara pachigaro chevushe.
Mweya mutsvene wakagara uri munhu akaoma kuti aiswe paTiriniti, inotaura kuti Munhu akazvimiririra muhuMwari, akaenzana nevamwe vaviri asi, muBhaibheri, aive asina zita. Munhu asina Zita? Pane chinhu chisina kumira zvakanaka.
Saka vanhu vakangwara vakaedza vachikundikana kufunga pamusoro “pamwari umwechete muvanhu vatatu” kana kuti “vanhu vatatu munamwari umwechete” tichiri nedambudziko rimwechete iri nhasi uno. Vanhu havakwanisi kunzwisisa chimwe chinhu zvakajeka kusvikira vawana mufananidzo wacho. (Ndicho chikonzero nei Jesu achidzidisa nemifananidzo, yaipfekedza pfungwa yaanenge achida kuburitsa pachena mufananidzo waive nyore kunzwisisa.) Pakadzama pepfungwa dzavo, mabhishopu paNicaea vese umwe neumwe wavo aive nemufananidzo wake wezvavaifungidzira kuti zvaive zvakaita Mwari. Asi mufananidzo uyu pakutanga waivadzimaidza pakati peMunhu mumwe neVamhu vaviri. (Mweya Mutsvene wakazowedzerwa pahuMwari hweTiriniti muna 381 AD pakanzuru yeConstantinople, kunyangwe mabhishopu vakamboedza kuisa Mweya Mutsvene pakanzuru yeNicaea, nenzira yaive isina kurudziro yakakwana). Saka vakatadza kumisikidza mufananidzo waMwari wakajeka wekutsigira pfungwa yavo. Vamwe vakaona Munhu wechipiri muhuMwari ari muduku. Vamwe vakaona Baba neMwanakomana vakaenzana. Gakava iri rakabva rabva pamufananidzo wavaive vakatarisana nawo, zvaiita sezvakanaka mune dzimwe nzvimbo muBhaibheri asi zvichirwisana neMagwaro mune dzimwe nzvimbo. Zvisinei, mativi ose mugakava iri vaive nemufananidzo usiri iwo. Kunyangwe nhasi uno, Tiriniti ichiri kukonzeresa kusanzwisisa uye chichiri chakavanzika. Vanhu vanotaura zvakawanda pamusoro pehuMwari, asi mazwi avo anoburitsa pachena zvinhu zvishoma kwazvo apo Tiriniti inoramba iri dzimaidzo yemazwi asiri muMagwaro, nekuti hapana kana kumwechete kwekutaura kwavo kunobva muBhaibheri. Zvakangofanana nekunge munhu akateerera munhu wezvematongerwo enyika achitaura.
Chinhu chakashungurudzwa zvizhinji paTiriniti raive Zita raMwari. Mwari Baba vainyanya kudaidzwa kuti Jehova. Mwanakomana waMwari ndiJesu. Saka dambudziko guru rekutanga raive rekuti hakuna zita rakapihwa Mweya Mutsvene muBhaibheri. Saka kungori nemaZita maviri, Jehova naJesu, ekuti titsanangure Vanhu vatatu.
Jusu akati tinofanira kubapatidzwa muZita (rimwechete) raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene. Zita rimwechete, riri rimwechete, kudaidza vanhu vatatu. Ichi chinhu chakaoma.
MATEO 28:19 Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, muvabapatidze muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene:
Hakuna Zita rimwechete revanhu ava vose vari vatatu.
Saka chinyararire Zita raMwari rakasiiwa rikatsiviwa nemazita matatu ezvinzvimbo --- Baba, Mwanakomana, uye Mweya Mutsvene. Izvi zvinzvimbo, uye hazvisi Zita. Saka nekuzivisa vanhu vakasiyana muhuMwari, mabhishopu echiKristu akabva abvisa Zita raMwari zvakazara.
Zvinhu zvakabva zvaipisisa. Kwakauya rubapatidzo rwemapostora vaibapatidza muZita raJesu Kristu, mabhishopu akabva ati mupostora pauro akakanganisa.
MABASA 2:38 Petro akati kwavari: Tendevukai, mumwe nomumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu,
MaKristu akadzidziswa kusiya kana kugadzirisa kana kuramba vhesi iri. Kwaive kutadza kukuru kwakaita basa guru kuviga chokwadi.
Kubapatidzwa chiratidzo chekuvigwa. Mutadzi anotendevuka ofa kuzvivi zvake kana kumunhu wekare airarama maari. Anobva avigwa mumvura chiri chiratidzo chekuvigwa umo maasingakwanisi kufema (zvichimiririra kufa) anobva “amuka kuvakafa” achibva mumvura ave munhu mutsva munaKristu.
Jesu oga ndiye akafa, akavigwa akamuka kuvakafa. Mwari Baba havana kubvira vafa, kana kuvigwa uye havana kumuka kubva kuvakafa. Mweya Mutsvene hauna kufa, kuvigwa kana kumukawo kuvakafa. Saka rubapatidzo harunei nevanhu vaviri ava muhuMwari.
VAROMA 6:3 Ko hamuzivi here kuti isu takabapatidzwa muna Kristu Jesu, takabapatidzwa murufu rwake?
4 Naizvozvo pakubapatidzwa takavigwa pamwechete naye murufu; kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwababa, saizvozvo nesu vo tifambe nohupenyu bwutsva.
5 Nokuti kana takava vamwe naye pakufanana naye parufu rwake, tichadaro vo pakumuka kwake.
Mwenga kana awanikwa anotora zita remurume wake. Saka maKristu anova Mwenga waKristu, anofanira kutora Zita raJesu Kristu anova murume wedu. Rubapatidzo rwemvura ndiwo wega mutambo watinokwanisa kutora nawo Zita raJesu.
Totenda kudzidziso yeTiriniti, maKristu akasiya kutora Zita raJesu Kristu kubva muna 325 AD. Parizvino vave nekutenda kwakadzimaidzwa kwekuti Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene iZita raMwari. Mazita matatu ezvinzvimbo akatsiva zita rimwechete. MaKristu haasisina Zita raMwari wavo. Hazvigoni kushandisa Zita rimwechete pavanhu vatatu vakasiyana.
Saka maKristu ekereke yekutanga aitenda kutii pamusoro peZita raMwari?
Mwari haaonekwe. Mweya usina chimiro kana mutumbi. Aikwanisa kuzviitira muviri weMweya. Akazosika Munhu, Jesu, kuti agare maari azviratidze, kana kuvonekwa achishanda mabasa mumunhu uyu. Munhu uyu akatora Ropa rake akaenda naro kudenga uko Muviri wake wenyama wakaitwa chibairo pachigaro chengoni. Akazotumira Mweya wake kudzoka kunyika kuzogara mumoyo yevanhu vake vatinodaidza kuti kereke yake.
SaMwari Baba, Mwari aive pamusoro pemaJuda achiratidzwa mumiviri yeMweya yakasiyana siyana paaionekwa navo ari Shongwe yeMoto, Shongwe yeGore, Dombo rinobuda mvura, kana kuti seMutumwa waMwari.
Pakuzviratidza uku Mwari akaita hwaro hweruponeso husina kukwanisa kuchengetwa nechero munhu.
SaBaba, maJuda aidaidza Mwari kuti “Jehova” rinova izwi rechiHeberu ratinoturikira isu toti “Ishe”.
Nekurarama muna Jesu, Mwanakomana aive Mwari, Mwari akaratidzwa Mumuviri wemunhu paakava munhu ega akagona kuchengeta murairo wakazara saka akabva azviwanira ruponeso rwake. Akabva asarudza kuzvipira kupa hupenyu hwake kuti isu sevanhu vasina kukwanira vasingagoni tigowanawo nhaka muruponeso rwaakazviwanira. SeMwanakomana waMwari, Jesu aive Emanueri zvinoreva kuti Mwari unesu seMunhu wenyama pakati pedu; musununguri.
MATEO 1:23 Tarirai; Mhandara ichava nemimba, ichazvara Mwanakomana, vachamutumidza zita rinonzi Emanueri, ndokuti kana zvichishandurwa: Mwari unesu.
Mwari ane Zita remunhu rimwechete, Jesu.
Saka Mwari paakaratidzwa kwatiri panyama ari Mwanakomana waMwari, Zita rake raive Jesu.
Jesu akatora Ropa rake akaenda naro kudenga kwaakagara pachigaro chengoni seGwaiana raMwari rechibairo, kuti atiregerere zvivi zvedu. Zvino nechishamiso akakwanisa kutumira pano pasi (kuburutsa) Mweya Mutsvene wake kuti ugare mumoyo yevarume nevakadzi. Saka, seMweya Mutsvene, Mwari anoratidzwa muvatendi vake.
JOHANE 14:17 Ndiye Mweya wazvokwadi; nyika haigoni kumugamuchira, nokuti haimuvoni; kana kumuziva, imi munomuziva nokuti ugere nemi; uchava mukati menyu.
Mweya Mutsvene ndiwo chizodzo. Jesu, Akazodzwa, muchiGiriki anodaidzwa kuti Christos. Isu tinozvishandura toti Kristu.
I TIMOTIO 3:16 Hakuna ungaramba kuti chakavanzika chokunamata chikuru kwazvo, chokuti: Iye wakaratidzwa panyama, wakaruramiswa paMweya,
Mukati menhorondo, Mwari akaratidzwa zvose muMweya uye senyama.
SaBaba akavonekwa seMweya pamusoro pemaJuda. Akadaidzwa neZita rechinzvimbo rechiHeberu rekuti Jehova zvichireva Ishe.
SeMwanakomana akavonekwa munyama ari Munhu Jesu, apo Mwari akagara pakati pedu. Aive neZita remunhu rekuti Jesu.
SeMweya Mutsvene Mwari anovonekwa munyama dzedu apo anorarama mumoyo yeavo vakazvarwa patsva. Ndiye Wakazodzwa, (Christos muchiGiriki) anodaidzwa nezita rekuti Kristu.
“Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene” zvinoreva kuti Mwari pamusoro pedu saIshe, Mwari unesu saJesu, Mwari mukati medu saKristu.
Ishe naKristu zvinzvimbo, asi zvinotibatsira kuti tibude pachena kuti ndiJesu upi watiri kutaura nezvake. Jesu iZita rake reMunhu. Saka Ishe Jesu Kristu iZita rimwechete rine zvinzvimbo zviviri zvinobata zano raMwari rese reruponeso.
Saka Zita raMwari ndiIshe Jesu Kristu.
Nei tichiwedzera mazita ezvinzvimbo Ishe kana Kristu? Nekuti vanhu vakawanda vane zita rekuti Jesu. Asi hakuna munhu anonzi Ishe Jesu. Hakuna munhu anonzi Jesu Kristu. Ndicho chikonzero nei zita rekupika naro rinofarirwa nevazhinji ndiJesu Kristu. Vatadzi vanoziva kuti mune simba muZita iri. Vanoziva kuti izvi zvinogumbura Mwari. Usareva Zita raIshe Mwari wako pasina. Izvi zvinodaidzwa kuti kumhura Mwari. Ndeumwe wemitemo inegumi. Saka zvakakosha.
EKSODO 20:7 Usareve Zita raJEHOVA Mwari wako pasina:
Hakuna mutadzi anomhura nekudaidza Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Vatadzi vanotoziva kuti zvinzvimbo izvozvo hazvisi Zita raMwari. Ndinovimba kuti kunyange kereke ichamukawo ikaziva chinhu ichi.